Abasebenzisi Bamahhala Bamahhala | Ukuthandwa kwama-Instagram kwamahhala
Thenga Abalandeli Be-Instagram Bansuku zonke
Thenga okuthandwa ngu-Instagram okuzenzakalelayo
Thenga Ukukhula Kwe-Instagram Okuhlosiwe Nokwemvelo
Ukuthandwa kwama-Instagram kwamahhala
Ababhalisile be-YouTube bamahhala
Thola Ukukhula Okusheshayo Nokuhlosiwe Ngabalandeli Bamahhala Be-Instagram Nokuthandwa Namuhla!
Sebenzisa insiza yethu ukuthola okubhekiswe, ikhwalithi ephezulu, abalandeli be-Instagram bamahhala futhi Ukuthandwa kwamahhala kwe-Instagram! Ukwenziwa kusebenze okungenamkhawulo ukuze uqhubeke nokuthola ukukhula kwansuku zonke. Azikho izinhlolovo!
Thola Abalandeli Abakhulu bama-Instagram kanye nokuthandwa or Thenga abathengi be-Instagram
Izinyathelo Ezilula Zokuvula Insiza Yethu Yamahhala
Kulula ukuthola okubhekiswe, ikhwalithi ephezulu, abalandeli be-Instagram bamahhala or ukuthandwa kwama-Instagram kwamahhala kusuka kunethiwekhi yethu! Inqubo ithatha kuphela imizuzu emi-2 ukwenza kusebenze uhlelo futhi nazi izinyathelo:
Yenza kusebenze Uhlelo Lamahhala
Landela Amaphrofayili Wentshisekelo
~ 2 Minutes Kamuva, Usuqedile!
Thola Abalandeli Bamahhala!
Bhalisa i-Akhawunti yakho yamahhala Manje
Izinhlelo Zokulandelana Zama-Instagram
Igijima amahora we-48
Thola abalandeli be-25
Landela amaphrofayili ayi-10 Aqondiwe
Kuthunyelwa Kungakapheli amahora ayi-48
Yenza kusebenze i-1x Njalo ngehora le-48
Abalandeli Bangempela, Azikho Amabhomu!
Iphrofayili Kufanele Yenziwe Esidlangalaleni
Kuphephile, Kuphephile & Kuyimfihlo
Abalandeli Bansuku zonke
Abalandeli bansuku zonke abayi-15 ($20.00) Abalandeli bansuku zonke abayi-30 ($40.00) Abalandeli bansuku zonke abayi-60 ($80.00)
Thola 15 Abalandeli abaqondisiwe
Landela amaphrofayili ayi-0 Aqondiwe
Ikhulula Njalo emahoreni angama-24
Uhlelo luyi-100% okuzenzakalelayo
Khansela Noma Isiphi Isikhathi!
Izinhlelo zokuthandwa ngu-Instagram
Zitholele ukuthandwa okungama-20 ku-1 Post
Kuthunyelwa Kungakapheli amahora ayi-24
Usebenzisa i-1x Njalo emahoreni ayi-24
25 Ukuthanda Ngokuthunyelwe ngakunye ($20) 50 Ukuthanda Ngokuthunyelwe ngakunye ($40) 100 Ukuthanda Ngokuthunyelwe ngakunye ($80) 200 Ukuthanda Ngokuthunyelwe ngakunye ($160) 500 Ukuthanda Ngokuthunyelwe ngakunye ($350) 1000 Ukuthanda Ngokuthunyelwe ngakunye ($700)
Thola 25 Ukuthandwa ngePost Post
Ukudiliva Ngaphakathi Amaminithi
Kuthunyelwa ngokuzenzakalela kokuthunyelwe okusha
Izizathu Ezi-7 Okufanele Ugxile Ekuzuzeni Abalandeli Abamahhala be-Instagram
Ukuqashelwa ku-Instagram kungaba ngomunye wabashintshi abakhulu bemidlalo laphaya ukusiza ibhizinisi lakho liqale. Ukuthola abalandeli nokuthandwa kusiza ukusabalalisa ukuqaphela ngomkhiqizo wakho nokufinyelela kumakhasimende angaba khona. Isayithi lokwabelana ngesithombe elidumile liziqhenya ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidigidi ezi-1, elinabasebenzisi abasebenza nsuku zonke abangaphezu kwezigidi ezingama-500. Noma ngubani nawo wonke umuntu uku-Instagram, futhi nabo bonke labo bantu bakhona babelana futhi bebeka amazwana kokuthunyelwe nezithombe, ungacabanga ukuthi ukuthola abalandeli kungaba ucezu lekhekhe. Kepha, njengezinto eziningi empilweni, ukwakha ubukhona bezokuxhumana obumiswe kahle kudinga ukubekezela nokuzimisela. Ngisho nochwepheshe bathi kuwumsebenzi onzima. Ngokusho Kwezobuchwepheshe Bokukhula Komphakathi, uTalia Koren, ukwakha ukulandela okunempilo kunoma iyiphi inkundla yezokuxhumana ukuzibophezela okukhulu, futhi ukuzuza lokho okuthandwa kakhulu nabalandeli kuthatha amasu, ikhono nesikhathi esiningi.
UMnu Insta Uyisixazululo Sakho Samahhala
Kukhona izinkampani laphaya ezingasiza ukukhulula enye ingcindezi yokwakha ubukhona bakho be-Instagram, njengathi, Mnu Insta! Eqinisweni, sisiza kakhulu amaklayenti ethu ngokunikela abalandeli be-Instagram mahhala! Kulungile – mahhala! Ngokukhulu kangaka ongahle ucabange ngakho, yini ebanjwayo?
Empeleni ilula kakhulu futhi ithatha imizuzu embalwa yesikhathi sakho. Vele ungene ngemvume, uvule uhlelo lwamahhala futhi uzokwethulwa ngamaphrofayili e-Instagram okufanele uwalandele. Lawa maphrofayili e-Instagram azoqondiswa ezintweni ozithakaselayo futhi ungeqa noma yini ongafuni ukuyilandela. Ngemuva kokuthi ulandele inombolo edingekayo yamaphrofayili, uhlelo lwakho luzosebenza. Sizoletha abalandeli be-Instagram ku-akhawunti yakho kungakapheli amahora angama-48, akukho mibuzo ebuziwe. Okuhle kunakho konke, ungaphinda lesi sinyathelo njalo emahoreni angama-48. Lokhu kusho ukuthi ungaqhubeka ukhulisa i-akhawunti yakho phakade!
Size sibe nezinketho zamakhasimende ethu ngaphandle kwalokho abalandeli be-Instagram bamahhala. Uma i-akhawunti yakho idinga ukuzibandakanya, unga thenga abalandeli be-Instagram, ukuthandwa, imibono, futhi nokuningi. Noma, joyina enye yezinhlelo zethu zokubhaliselwe zanyanga zonke. Lezi zinhlelo ziletha abalandeli abafanelekile noma okuthunyelwe okuthandwayo kuphrofayela yakho nsuku zonke; konke ukuze uthole imali ephansi yanyanga zonke.
Uyazibuza ukuthi ukuthenga noma ukuthola usizo mahhala kukulungele yini? Uma kunjalo, qhubekela phambili ufunde ngezizathu ezi-7 eziphezulu zokuthi kungani ukuthola abalandeli abaningi kuyisinyathelo esingcono kakhulu sebhizinisi lakho nomkhiqizo.
Ufuna ukwakha ukufaneleka kwenkampani yakho
Ngokubaluleka okukhulayo kwemithombo yezokuxhumana yamabhizinisi, ukusebenza kwe-akhawunti sekuyinto enquma ukuthi amakhasimende afuna ukwenza ibhizinisi nawe yini. Uma iphrofayili yakho yebhizinisi inenani elikhulu labalandeli, kuzovela kumakhasimende ukuthi inkampani yakho ibikade ikhona futhi iyazi ukuthi yenzani. Izinkampani ezinabalandeli abambalwa nokuzibandakanya okuphansi kubonakala kungenakho okuhlangenwe nakho. Ngenxa yalokhu, amakhasimende angahle anqume ngokungathengi umkhiqizo wakho. Ukuthola abalandeli abengeziwe kwenza iphrofayli yakho ibonakale inolwazi futhi kubeka amathuba akho okuthola amakhasimende wangempela.
Umusha emithonjeni yezokuxhumana futhi iphrofayili yakho ingasebenzisa ilifti
Kuliqiniso elibuhlungu ukuthi iningi lamaphrofayili e-Instagram amasha akuthola kunzima ukuqashelwa ngaphambi kokuthi akwazi ukuzuza abalandeli abaningi. Kweminye imikhakha, njengasembonini yemfashini, onobuhle ngeke baze bacatshangelwe ukuthi baqashwe uma bengenalo inani elithile labalandeli. Isizathu ukuthi, iningi lemikhiqizo lifuna ukuqasha abantu abaziwayo emkhakheni wabo ngalolo hlobo lomsebenzi. Lokhu kungabeka amamodeli alandelayo kusimo esingesihle uma uzama ukutholwa.
Yize ngethemba ukuthi imboni yakho ayiqinile kangako, iqiniso lendaba ama-akhawunti amasha ebhizinisi, futhi ngokuhlangana, amabhizinisi amasha, akuthola kunzima ukubonwa. Iqhinga elaziwa kancane, kepha izinkampani eziningi sezithenge abalandeli be-Instagram. Kulungile, izindawo zokudlela, abasubathi, izinhlobo zezimpahla zokugqoka, ngisho nosopolitiki bonke bathenge abalandeli kuma-akhawunti abo futhi babone imiphumela emangalisayo. Ngokusebenzisa ingxenye encane yesabelomali sakho sokumaketha kubalandeli be-Instagram, wenza into efanayo njengokukhokha ukukhuthaza okuthunyelwe ku-Instagram. Umehluko ukuthi, imali yakho iya phambili kakhulu uma uthenga abalandeli ngoba uqinisekile ukuthi uzoyithola inani olithengayo. Uma uthuthukisa okuthunyelwe, okungcono kakhulu ongakwenza ukuthemba ukufinyelela abalandeli abangamakhulu ambalwa, futhi imiphumela ayiqinisekisiwe.
Ufuna ukubonwa izethameli zamakhasimende ezinkulu
Cabanga ngendlela ongahlulela ngayo iphrofayela yomngane ongenabo abalandeli abaningi, noma okuthunyelwe okungenakho ukuhlanganyela okuningi. Kungase kube nzima ukuvuma, kodwa ekugcineni, sonke sicabanga into efanayo lapho sibona lezi zincwadi; lo muntu akathandwa. Lo mcabango uvela ekuziphatheni komuntu okubizwa ngokuthi "ubufakazi bomphakathi." Ngokobufakazi bomphakathi, sivame ukwahlulela indlela yokuziphatha nokuthi yini esiyithandayo ngokusekelwe endleleni abanye abaziphatha ngayo, nokuthi yini abayithandayo. Ungakubona lokhu kusebenza kuzo zonke izinkundla zokuxhumana.
Yindlela okuthunyelwe okukwazi ngayo ukuhamba ngegciwane. Othile ubona okuthunyelwe okuthakazelisayo, ngakho wabelana ngakho nabalandeli bakhe. Abalandeli babo bayabona ukuthi lo muntu kumele ukuthi ukujabulele lokhu okuthunyelwe ngoba wabelane ngakho, ngakho abalandeli bakhe baqala ukwabelana ngakho. I-Instagram ithanda okuthunyelwe okuvela kuma-akhawunti anokuzibandakanya okuphezulu futhi anenani elikhulu labalandeli. Ngakho-ke njengoba okuthunyelwe kwakho kukhula ukuthandwa nokuphawula, uma i-akhawunti yakho inabalandeli abaningi, uzovela unyuka ngokunyuka ekusesheni. Ngokushesha umshado uqala ukukhithika, futhi kungakabiphi, abantu abaningi sebebonile okuthunyelwe kwakho. Uma uthenga abalandeli be-Instagram, uthatha isinyathelo sokuqala sokungena egazini, futhi ubonwe yizinkulungwane, noma izigidi zamakhasimende.
Umatasa kakhulu ngezinye izinhlelo zebhizinisi
Ukuphatha ibhizinisi kudinga ukuzikhandla okukhulu namandla. Imisebenzi engenakubalwa idinga ukuqedwa ukugcina imisebenzi isebenza kahle, kepha kukhona amahora amaningi kuphela ngosuku. Sesivele sikhulume ngesikhathi esithathayo ukwakha i-Instagram enempilo elandelayo, futhi amathuba okuba ube nohlu lonke lokuhlanza eminye, mhlawumbe ebaluleke kakhulu, imisebenzi yebhizinisi edinga ukwenziwa. Ungaqasha umphathi wezokuxhumana ukuze anakekele iphrofayili yakho, kepha lokho kungasho ukukhipha imali engaphezulu kwama- $ 50,000 ngonyaka ngomholo nezinzuzo zabo. Uma uthenga abalandeli be-Instagram, uzisindisela imali nezinsizakusebenza ezingadinga ukuqasha umuntu noma ukukhulisa i-akhawunti yakho wedwa. Lokhu kukhulula isikhathi esibalulekile osukwini lwakho, kukuvumela ukuthi ugxile kangcono ezinhlosweni ezibalulekile zenkampani.
Ufuna ukwakha okulandelayo kwamanye amasayithi wezokuxhumana
Abakwa-Facebook bathenga i-Instagram emuva ngo-2012. Lapho lezi zinkampani zihlangana, amapulatifomu enza ukuba kube lula ukuthumela ku-Facebook, ku-Twitter, naku-Tumblr khona kanye ku-Instagram yakho! Ungashintsha nezilungiselelo zakho ukuze uzithumele ngokuzenzekelayo ku-Facebook njalo uma uthumela ku-Instagram. Ngenxa yokuthi i-Facebook ne-Instagram zisebenza eduze kangakanani, maningi amathuba okuthi uma uthandwa ku-Instagram, ngeke kube isikhathi eside ngaphambi kokuba uthole ukuthandwa nakuFacebook. Ukuthenga abalandeli be-Instagram kukhulisa ukuthandwa kwakho futhi kukunikeze ithuba elingcono lokuthandwa kwamanye amasayithi.
Udinga ukubuyekezwa okuhle
Buyekeza amasayithi afana ne-Yelp, i-Google Business, ne-Trip Advisor akuseyona indawo kuphela lapho amakhasimende angashiya khona imibono yawo. I-akhawunti ye-Instagram enabalandeli abaningi ifana nephrofayili ye-Yelp yebhizinisi enezibuyekezo eziningi ezinhle. Ngemuva kwakho konke, abantu abalandela ikhasi lakho babhalisile ukuze babone okuqukethwe kwakho, ngakho-ke imikhiqizo yakho, ezindabeni zabo zondliwa nsuku zonke. Izinkinga, bacabanga kahle kakhulu ngebhizinisi lakho! Lapho abathengi abangaba khona babona inani elikhulu labalandeli nokuzibandakanya okuphezulu kokuthunyelwe kwakho, umphumela uyafana nokubona izibuyekezo eziningi ezinhle. Ukuthola abalandeli kwenza imikhiqizo nezinsizakalo zakho zibonakale zisezingeni eliphakeme kubathengi futhi kusebenza njengendlela yokuthuthukisa isilinganiso sakho phakathi komncintiswano wakho.
Ufuna ukwenza imali eningi!
Imithombo yezokuxhumana isibe yingxenye ebaluleke kakhulu kunoma yiliphi isu lokumaketha. Isizathu sokuthi uthathe isikhathi sakho ukudala amaphrofayli kuzingxenyekazi ezahlukahlukene silula, ufuna ukukhulisa inzuzo yebhizinisi lakho. Wonke umuntu wabasebenzisi abayi-1 billion baka-Instagram bangamakhasimende angahle abe khona. Kepha, ngenxa ye-algorithm ye-Instagram, kungaba nzima kakhulu ukubonwa ngisho yingxenyana yalawo makhasimende. Ukuthenga abalandeli be-Instagram kwandisa ngokushesha inani labantu ababona imikhiqizo yakho. Lapho abantu bebona kakhulu imikhiqizo yakho, maningi amathuba okuthi abantu bazothenga imikhiqizo yakho, bakhuphule ukuthengisa kwakho, futhi basize umugqa wenkampani yakho.
Usazibuza ukuthi ukuthenga noma ukuthola izinsiza zamahhala kukulungele yini?
Usuku ngalunye amabhizinisi amaningi ajoyina i-Instagram njengendlela yokukhangisa imikhiqizo yawo kumakhasimende awo. Lokhu kusho ukuthi, umncintiswano uya ngokuba mkhulu, futhi kuba nzima nakakhulu ukwenza isiqiniseko sokuthi izwi lenkampani yakho liyazwakala. Uma wenza ukukhetha ukuthenga abalandeli be-Instagram, ukhulisa ngokushesha imizamo yebhizinisi lakho, futhi usungula ubukhona bomkhiqizo wakho. Wonga isikhathi osukwini lwakho lokusebenza, uthole ukuthandwa yizithameli zakho, futhi ekugcineni, uzuzela ibhizinisi lakho imali eyengeziwe.
Ukuthenga abalandeli kungenye yezimfihlo ezigcinwe kahle zokumaketha futhi kuyindlela ebalulekile nesebenzayo yokwenza ibhizinisi lakho laziwe ezinkundleni zokuxhumana.
Ufuna ukufinyelela izethameli eziningi futhi ukhulise i-akhawunti yakho ye-Instagram? Thola abalandeli be-Instagram bamahhala kithi, Mnu. Insta, noma uthenge iphakethe lokuzibandakanya namuhla!
Unemibuzo mayelana nensizakalo yethu? Nayi imibuzo yethu ebuzwa njalo:
Kungani ngidinga abalandeli be-Instagram abakhululekile?
Sonke siyazi ukuthi ukuba nabalandeli abaningi be-Instagram kunezinzuzo eziningi ku-akhawunti yakho ye-Instagram. Uma unabalandeli abaningi, uvame ukuthola ukuthandwa okwengeziwe, ukuphawula okwengeziwe, nokubukwa okwengeziwe. Lokhu kusiza ngempela labo abazama ukuziphilisa noma ukuthola ukuchayeka besebenzisa i-Instagram.
Ngemuva kweminyaka yokuba ngabaholi embonini “Yabalandeli Be-Instagram Bamahhala”, sesenze uhlelo lwamahhala lwe-100% lwabasebenzisi lokuthola abalandeli abaningi be-Instagram nsuku zonke. Asezingeni eliphezulu futhi aqondiswe kuzintshisekelo zakho. Odinga ukukwenza nje ukuxhumana nama-akhawunti ambalwa e-Instagram akhangayo!
Kuyisinqumo esilula ukusebenzisa uMnu. Insta. Awudingi ukugcwalisa noma yiziphi izinhlolovo noma unikeze ulwazi lomuntu siqu. Okuhle kunakho konke, ungasebenzisa isevisi yethu yamahhala izikhathi eziningi ezingenamkhawulo! Lokhu kusho ukuthi ungathola abalandeli abaningi ngosuku olulodwa, inqobo nje uma ufuna ukuqhubeka ukhula.
Kuphephile ukusebenzisa insiza yakho yamahhala?
Kucacisiwe ngokusobala ukuthi abasebenzisi ababelana ngegama lomsebenzisi ne-password yabo ye-Instagram namasayithi / izinhlelo zokusebenza zomuntu wesithathu bangafaka i-akhawunti yabo engcupheni. Ngokuvumelana ne Instagram,
“Uma unikeza lezi zinhlelo zokusebenza ulwazi lwakho lokungena, noma ngabe ngethokheni yokufinyelela noma ngokuzinikeza igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi, zingathola ukufinyelela okuphelele ku-akhawunti yakho. Bangabona imilayezo yakho siqu, bathole ulwazi mayelana nabangani bakho, futhi bathumele ugaxekile noma okunye okuqukethwe okuyingozi kuphrofayela yakho. Lokhu kubeka ukuphepha kwakho, nokuvikeleka kwabangane bakho engcupheni.”
Uzoqaphela lapho udala i-akhawunti yakho yamahhala, ASIdingi ukufinyelela kuphrofayela yakho ye-Instagram. Asilokothi sikucele iphasiwedi yakho futhi sincoma ukuthi ungakukhiphi lokhu, FUTHI! Sidinga ukuthi unikeze igama lakho lomsebenzisi le-Instagram. Lokhu kuyadingeka ukuze sazi ukuthi iyiphi i-akhawunti okufanele sithumele kuyo abalandeli.
UMnu. Insta ubelokhu eletha abalandeli bamahhala kusukela ngo-2013. Eqinisweni, singamavulandlela ekunikezeni lezi zinkonzo. Uzoqaphela ukuthi izinsiza eziningi ziye zavela zithi zinikeza abalandeli bamahhala, kodwa ngokuvamile zidinga ulwazi lwe-akhawunti yakho, noma ukuthi uqedele umsebenzi othile onzima ongawufanele neze. Eminyakeni edlule, asikaze sivinjwe i-akhawunti ye-Instagram. Sihlala sibuyekeza izibuyekezo ezenziwe yi-Instagram futhi silungisa izindlela zethu zokuletha ngokufanele.
Ngabe laba balandeli be-Instagram bangempela?
Sinikeza abalandeli bangempela kumakhasimende ethu akhokhelwayo, ngokungafani nama-98% wamawebhusayithi akhona. Amanye amawebhusayithi amaningi athi anikela ngale sevisi yamahhala, kodwa awakwenzi lokho!
Siyakwazi ukuhlinzeka le sevisi yamahhala ngoba wonke umlandeli ozuzwa kusetshenziswa insiza yethu ye-follow4follow ungomunye umsebenzisi ofana nawe.
Inkonzo yethu iwumphakathi ovumela abantu abafana nomqondo ofanayo ukutholana futhi baxhumane. Singumlamuli nje.
Ungakhohliswa amasayithi athi ahlinzeka ngabalandeli bangempela. Kuhlale kushiwo ukuthi uma kubukeka kukuhle kakhulu ukuthi kube yiqiniso, kungenzeka ukuthi…futhi ukuze kucace ngokuphelele, kufanele siqaphele ukuthi ikhwalithi yabalandeli izohluka. Lokhu kungenxa yokuthi abanye abantu bavele babeke umzamo omkhulu kuma-akhawunti abo kunabanye. Lokhu kuyafana okufanele kushiwo nge-Instagram iyonke. Ngakho-ke, ungethuki uma umzuzu owodwa umkhiqizo opholile ngempela ukulandela bese ngomzuzu olandelayo kulandele umuntu ojwayelekile onezithombe ezimbalwa.
Akunandaba nebanga labalandeli bonke abathunyelwa kuwena, bakhethwa ezintweni ezifanayo ozikhethile ngenkathi ubhalisela insizakalo yethu.
Ngibagcina kanjani abalandeli bami be-Instagram?
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi kuwumsebenzi wethu ukuletha abantu abasha ekhasini lakho le-Instagram Mahhala. Kungumsebenzi wakho ukuwagcina lapho. Ucwaningo lubonisa ukuthi uma ikhasi lakho lingenakho okuqukethwe okuningi noma linganikezeli ngokuqukethwe okusha nokubandakanyayo njalo izinombolo zakho zizowa.
Senza konke okusemandleni ethu ukuze sinikeze abantu abanentshisekelo efanayo. Lokhu kusho ukuthi uma sicabanga ukuthi ikhasi lakho lihlinzeka ngokuqukethwe mayelana nezinto ozithakaselayo ozikhethile ngaphambi kokusebenzisa uhlelo lwamahhala noma olukhokhelwayo okungenzeka ukuthi ulinakekele futhi ukhulise ikhasi lakho. Ochwepheshe baphakamisa ukuthi ukuthumela okuqukethwe kwekhwalithi izikhathi ezingu-1-3 ngosuku kubonakala kuheha imiphumela engcono kakhulu. Kubalulekile ukuthatha isikhathi sakho ngokuthunyelwe kwakho. Qinisekisa ukuthi izithombe/amavidiyo asezingeni eliphezulu futhi ahlobene nendikimba ye-Instagram yakho.
Okokugcina, qiniseka ukuthi usebenzisana nezithameli zakho. Uma bebeka amazwana kokuthunyelwe kwakho qiniseka ukuthi uyabaphendula. Futhi cabanga ngokuvakashela ikhasi labo futhi ubanikeze ukuthanda noma okubili. Kuzohambisana uma kuza ekudaleni ubudlelwano besikhathi eside nekhasi lakho.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthola izinsizakalo zamahhala?
Uma usuvule ngempumelelo uhlelo lwamahhala, uzoqala ukubona abantu abasha beqala ukulandela iphrofayela yakho phakathi nemizuzu emi-5. Njengoba uthola abalandeli bangempela nabakhuthele, abangeni kanyekanye. Njengoba uhlelo lwakho luqhubeka emahoreni angu-48 alandelayo, uzowathola ngokungahleliwe ngaphambi kokuphelelwa yisikhathi kohlelo. Ngaleso sikhathi, ungabuya futhi uyisebenzise futhi.
Ukuziletha ngephethini ephilayo nengokwemvelo yokukhula kwangempela kwesikhathi eside nokuqhubekayo kusiza ukuqinisekisa ukuphepha kwe-akhawunti yakho ye-Instagram. Ayikho enye isevisi ku-inthanethi ebeka lokhu kunakekela okungaka ekulethweni kwezinsizakalo zabo zamahhala. Siwakhathalela ngempela wonke amalungu omphakathi wethu ngoba ngaphandle kwakho, bekungeke kusebenze.
Kungani le sevisi imahhala?
Yilokho esihlale sikwenza! Siyiqembu labantu abathanda ukuqhamuka namathuluzi amahle wonke angawasebenzisa, kungakhathaliseki ukuthi ungubani noma ukuphi emhlabeni. Asikho esinye isiza sokukhula kweSocial Media esingasho lokhu ngokweqiniso.
Kusukela ekuqaleni kuka-2013, lapho siqala akuphelanga sikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi wonke amanye amasayithi aqale ukuphinda amasevisi ethu. Nokho, bahluleka ngezindlela eziningi. Ngempela abanandaba nabasebenzisi babo bamahhala. Lokhu kuboniswa ngokufunda izibuyekezo zabo ezingenakubalwa ezingezinhle ku-inthanethi.
Akuthina lokho! Siyakuqonda ukubaluleka kokususa iphrofayili ye-Instagram. Kungumsebenzi onzima futhi namuhla amathuba anqwabelene ngokumelene nawe.
Yingakho sizohlala silwela ukunikeza inani langempela noma uthenga isevisi kithi noma cha. Sifuna nje ukukusiza ukuthi wakhe futhi ngubani owaziyo, mhlawumbe uzozama enye yezinye izinkonzo zethu. Uma ungakwenzi lokho kulungile nakho! Sifakazela lokhu ngokukuvumela ukuthi usebenzise izikhathi ezimbili njalo ngamahora angama-48 futhi kumahhala kuze kube phakade!
Ngiyenza kanjani imali ku-Instagram yami?
Kunezindlela eziningi zokwenza imali usebenzisa i-Instagram. Lokhu kuqala ngokuba nekhasi elihle. Leli khasi elihle kufanele libe nokuqukethwe kwekhwalithi ephezulu okuqondiswe kuzithameli ezithile. Ngokuphikisana, lesi isinyathelo esibaluleke kakhulu sokwenza imali ku-Instagram.
Manje, ungaqala ukwakha okulandelayo. Amasevisi ethu amahhala asiza ama-akhawunti amaningi ukwenza lokhu ngomzamo omncane kakhulu. Siletha abasebenzisi abaqondisiwe ngokusekelwe ekukhetheni okwenzayo lapho udala i-akhawunti. Uma usuwakhe abalandeli abaningi ngokwanele, ungakwazi ukufinyelela kubanikazi bamabhizinisi/imikhiqizo njll. ukuze ubonise umkhiqizo noma isevisi yabo ngenkokhelo.
Kukhona namawebhusayithi ongawasebenzisa ukukusiza ukukuxhumanisa nenkampani efanele ye-akhawunti yakho ye-Instagram. Abantu abaningi emhlabeni wonke bayakwenza lokhu.
Kuthiwani uma ngidinga ukuxhumana nawe mayelana ne-akhawunti yami?
Yilapho sikhanya khona ngempela! UMnu. Insta UZOKUphendula kungakapheli amahora angama-24-48 aqinisekisiwe! Noma ngabe sikhulu noma sincane kangakanani isicelo. Ngokuvamile uzoba nempendulo esikhathini esingaphansi kwamahora angu-48 kodwa ukuze ube sohlangothini oluphephile njengoba ezinye izinkathi zonyaka zimatasa kunezinye esingafuni ukuthembisa into esingakwazi ukuyifeza.
Ungasikholwa? Sizame bese uvele usithumelele umlayezo. Ngisho noma ufuna nje ukuthi “sawubona” futhi usazise imicabango yakho ngenkonzo. Uzobona isevisi eza nokusebenzisa isiza esingcono kakhulu ku-inthanethi samahhala wezinsizakalo ze-Instagram.
I-24th Meyi 2022
Ungasisebenzisa Kanjani Isici Sokumaka Somkhiqizo we-Instagram ukuze Uzuze?
Ngabasebenzisi abasebenzayo abangaphezu kwesigidigidi, ayikho inkundla engcono emhlabeni njengamanje kune-Instagram uma kuziwa ekuboniseni imikhiqizo yakho phambi kwezithameli ozihlosile. Eminyakeni yamuva nje, i-Instagram ine...
I-13th Meyi 2022
Amathrendi Amabi e-Instagram Akufanele Uwalandele ngo-2022
I-4th Meyi 2022
Mangaki Amathegi Okufanele Uwasebenzise ku-Instagram?
Sinikela Ngezinsizakalo Ezengeziwe Zokumaketha ze-Instagram
Instagram Services Izinsizakalo ze-Twitter Izinsizakalo zeTwitch Amasevisi we-Pinterest Amasevisi we-YouTube Spotify Services Izinsiza ze-SoundCloud
Ucwaningo lwamaHashtag Abalandeli Ukuthandwa Ukuthandwa kwe-IGTV Ukubukwa kwamaReels Okuvelayo nokufinyelela Ukubukwa kwe-IGTV Amazwana
Subscribers Ukubukwa Ukuthandwa Amazwana Bukela amahora Amasheya
Thenga Engosini yethu Yozakwethu
Lapha kwa-Mnu. Insta, siyaziqhenya ngomsebenzi okhethekile nezintengo ezithengekayo. Ungagcini nje ngokuthatha izwi lethu ngakho - hlola ukubuyekezwa kwamakhasimende ethu ngezansi.
Kuyamangalisa ngempela! Amaphesenti angu-100 asheshayo mahhala futhi asemthethweni! Angikholwa ukuthi bangaki abalandeli engibazuzile ngiyabonga mr insta indawo engingaya kuyo Ithande kakhulu! Lolu hlelo lokusebenza olumangalisayo! Lokho kulula ukukusebenzisa futhi kuyashesha ngokushesha uma une-folwer ku-Instagram yakho.
- IJAGAD B.
UMnu. Insta Usize ukukhulisa abalandeli bami ezinsukwini ezimbalwa nje. Wonke umuntu ofuna ukukhulisa abalandeli bakhe khona manjalo lokhu kuwufanele ukuhlolwa
Ngeneliseke kakhulu ngabo. Okuhle kakhulu ebhizinisini. Phakathi nobusuku obubili abalandeli bami basuka ku-200 baya ku-598 n counting dont waste time come
Indawo emangalisayo ongaya kuyo uma udinga usizo lokuqala ikhasi kunoma iyiphi inkundla yezokuxhumana. Futhi inikeza abalandeli mahhala! Hamba uzibambe manje!
- UChris R.
Bekushesha ngempela futhi kulula ukuyisebenzisa. Ngibone imiphumela ngokushesha, ngabalandeli ngemuva nje kokuthi ngilandele amakhasi ayishumi, ongakhetha kuwo.
Isayithi elihle futhi, okubalulekile, limahhala, ungalisebenzisa ukukhulisa ukuhambisana kwekhasi lakho le-ins ngaphandle kokulahlekelwa ngisho nesenti.
Le sayithi ilungele abalandeli nokuthandwayo ngoba ungathola izinto eziningi futhi zonke izinto ziyasebenza ngempela!
Basinika abalandeli be-instagram mahhala bangamaphesenti angu-100 abasemthethweni asihambe ngibonga kakhulu manje sengidumile kakhulu
Kuhle kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa !!!
Lokhu kusebenza kahle kakhulu! 100% Izame nginekhasi lokuhlola ikhithi izikhathi eziningi ngemva kokuposa ngenxa yokuthandwa!
UMnu Insta uphelele uma ufuna ukuqala ukuthuthukisa i-akhawunti yakho ye-instagram, izokunikeza abalandeli bekhwalithi abavela kuwo wonke umhlaba. Isinyathelo sokuqala uma usunenombolo engaguquki yabalandeli ezuzwe kuMnu Insta uzoqala ukuba nephrofayili ekhangayo ezoholela kubalandeli abasha nabaphilayo. Indawo Engcono Kakhulu yokuqala
- U-Alejandro W.
Ngithole abalandeli n ukuthandwa ngiyabonga! Pls ungayeki futhi ngethemba ukuthi nami ngizothola okwengeziwe.! Thanda kakhulu
- amajini k.
Isiza esimangalisayo sokuthola ukukhula kwe-Insta mahhala kukhona okufika okufushane njengokuthatha isikhathi esiningi kepha kuseyinkundla enhle.
Kuyasebenza! Bese banikeza ukuthandwa okuningi kwamahhala ukuze ukwazi ukuqala ukwakha okuthile ngaphambi kokukhokha noma iyiphi imali.
Inikeza abalandeli bamahhala kanye nezinsizakalo ezikhokhelwayo ezisemthethweni futhi
Kuhle kakhulu kimi ungathola abalandeli abaningi ngisho mahhala kuyasiza kakhulu futhi kuthembekile engingancoma kuphela
uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu
Kuyasiza ngempela futhi kukutholela abalandeli bangempela be-Instagram ngibalinganisela izinkanyezi ezi-5 ngenxa yomsebenzi wabo omangalisayo owawuvumela ukuba nabalandeli ngaso sonke isikhathi lapho ufuna.
- Umsindo M.
Le webhusayithi iletha njengoba kuthenjisiwe. Ngincoma kulabo abafuna abalandeli abaningi. I-interface eklanywe kahle yenza kube lula ukuthola okufunayo kuwebhusayithi!
Ngijabule ngendlela emangalisayo ukubukeza iwebhusayithi enhle kangaka, lapha ungathola ukuthandwa nabalandeli bamahhala futhi nezinsizakalo zeprimiyamu ziyamangalisa! Ubungayithanda.
- UDanny R.
Ingisiza ngikhule ku-Instagram ngokwabelana nge-akhawunti yami nabanye futhi ngibenze balandele ukuze nabo bakhule
Iwebhusayithi isize ukuqala ikhasi lami lenkundla yezokuxhumana. Yayimahhala futhi ingenazo izinkinga, futhi zazingekho izinkinga zokuphepha, okwakwenza kwaba ngcono nakakhulu. Ngingathanda ukuncoma wonke amakhasi e-akhawunti amasha ukuthi adlule kuwebhusayithi yakho.
Ngabe ufuna abalandeli be-Instagram abakhululekile, abasezingeni eliphakeme nabakhonjiwe nsuku zonke?
Thola Abalandeli be-Instagram bamahhala, abasezingeni eliphakeme kanye nabakhonjiwe ngokuchofoza nje okumbalwa kumhlinzeki othembekile we-Intanethi wezinsizakalo zokumaketha ze-Instagram. [i-imeyili ivikelwe] I-USA NE-CAN: 888-881-9070
Imininingwane © 2022 Mr. Insta (mrinsta.com). Wonke Amalungelo Agodliwe. Ibalazwe
Amathiphu Namasu Okumisa Ogaxekile Bebeka Imibono Kokuthunyelwe Kwakho Kwe-Instagram